Ciyaarta Casaanka Curly Timaha B Cup Emma Finn 148CM TPE Doll Sex Doll
Dolls Galmo Jinsi ah,Caruusadaha qaabka yurubiyanka ah,C cup caruusadaha galmada,Doollar Jecel
Sheekada taariikhda Emma:
Ma ogtahay in gabdhaha timaha cas ay yihiin kuwa ugu jacaylka iyo xamaasada badan? Fiiri quruxdan caatada ah ee quruxda badan lehna jirka quruxda badan iyo wejiyada dhabta ah - ma doonaysid inaad ka baxdid qolka jiifka.
Emma waa mid faraxsan oo firfircoon, laakiin sida walaalo dheer, waxaa hubaal ah inay jiri doonto wax aynaan aqoon. Qaarkood waa dabiici, laakiin sidoo kale waa geesiyiin. Ma garanayo sababta ay xoogaa xoogaa u degganayn.
Waxay leedahay riyo, waxay rabtaa inay noqoto xirfadle e-sports player ah. Caqiidooyinkeeda qaarkood waa inay ka yimaadaan waqtigeeda u yeerista. Markii ay la kulantay tababar adag, waxay isticmaali kartaa wax kasta oo fikirkeeda ah si ay u abuurto Warcraft awood leh oo ka baxa hawada khafiifka ah. Laakiin iyadu sidoo kale waxay lahayd dhinac daciif ah oo gudaha ah.
"Waxaa laga yaabaa in qof walba waxa uu doonayo uu ka duwan yahay, qaybta ugu hooseysa ee qalbigeygana, waxaan u jecelahay inaan helo jacayl dhab ah. Isla mar ahaantaana, waxaan aad ugu hamuun qabaa galmada. Waxaan qiyaasi karaa oo keliya dareenka jacaylka maalin walba. II waligey ma soo marin. II waxaan rajeynayaa in halkaan aan kaga takhaluso nolosha kelinimada ah Emma ayaa tiri markay u timid shirkadeena.
Waa tuulo yar oo sabool ah oo ka timid Mareykanka. Waxay ka caawisay qoyskeeda shaqada guriga ilaa yaraanteedii. Noloshii foosha waxay siisay iyada jidh aad u caafimaad qaba. Petite iyo caato, indhaha weyn ayaa dhalaalaya. Naaso yaryar oo is haysta oo koob B ah. Curls casaan dhalaalaya. Ma ahan sida gabar daciif ah. Maqaarkeedu wuu ka textured badan yahay. Iyadu waa gacaliyahaaga kaamil ah. Gurigeeda geeya. Weligaa kama qoomameyn doontid, maxaa yeelay waad ogtahay, waxay ku siin kartaa riyooyin iyo raaxo badan.
Waxaad u isticmaali kartaa qaybtaan ka mid ah afka, xubnaha taranka, futada, waxaa loo isticmaali karaa galmada afka, cumshot, futada iyo naasaha. Waxay sidoo kale la kulmi kartaa muuqaal kasta oo aad rabto.
100% gaadiidka qarsoodiga ah - cidina ma ogaan doonto waxa gudaha ku jira, waxaan aad u diirada saareynaa ilaalinta arimahaaga gaarka ah. Sanduuqa malaha wax sumado ah.
Liiska xirmooyinka Emma:
Dhererka ： 141cm 157cm
Koob D B
Miisaan ： 63 lbs (29kg) 77 lbs (35kg)
UstDayaanna ： 26, (67cm) 26, (67cm)
Dhexda ： 19, (48cm) 19, (48cm)
Miskaha ： 30, (77cm) 30, (77cm)
Siil ： 7.1, (18cm) 7.1, (18cm)
Futada ： 6.7, (17cm) 6.7, (17cm)
Afka: 4.7, (12cm) 4.7, (12cm)